मोवाइलको ‘ग्रे मार्केट’देखि डराउनुपर्ने अवस्था छः पुरुषोत्तम खनाल| Corporate Nepal
बैशाख २७, २०७८ सोमबार १८:१०
कोरोना महामारीसँगै इन्टरनेटको महत्व र प्रयोग बढेर गएको छ । सँगसँगै यस सेवाको गुणस्तर सुधारको कुरा पनि उठेको छ । सुचना प्रविधिमा तीब आर्थिक विकासको लक्ष्य राखेको सरकार यो क्षेत्रमा के कस्तो काम गर्दैछ ? आम चासोको विषय बनेको छ । मोवाइलको अवैध आयातलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि फाइभजीका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने कुरा अहिलेको दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रमुख मुद्दा हुन् । यस विषयमा यस क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल के भन्छन् ? उनीसँग कर्पोरेट नेपालका नबिन पोखरेलले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
प्राधिकरणमा आउँदाका तपाईंका योजना कति पूरा भए ?
हाम्रा योजनाहरू ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म कार्यान्वयनमा गएका छन् । विगत एक वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण परिस्थिति कावुभन्दा बाहिर गएको छ । सोही कारण उपकरणहरू आयात गर्न असहजता सिर्जना भएको छ । उपकरण ल्याउन समस्या छ । ल्याएको सामान पुर्याउनका लागि यातायात पनि विगतको जस्तो सहजरुपमा चलेको अवस्था छैन । त्यस्तै, आवश्यक ठाउँमा प्राविधिकहरूलाई पुग्न पनि असहज अवस्था छ ।
कोरोना महामारी अन्य व्यवसायमा जसरी हानी नोक्सानी गरिरहेको छ त्यसरी नै दूरसञ्चार क्षेत्रको गतिलाई यसले प्रभावित पारेको छ । त्यो हिसाबले हेर्दा मैले आफूले चाहेका तथा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेका योजनाहरू अधिकांश त सम्पन्न भएका छन् । तर कतिपय भने सम्पन्न हुने क्रममै छन् ।
एमडीएमएस प्राथमिकतामा राख्नुभएको थियो । अहिलेसम्म पूरा भएको छैन्, नि ?
जेठसम्ममा हामीले एमडीएमएसको सबै पूरा गर्ने हिसाबले काम गरिरहेका थियौं । कोरोना महामारीले सो योजनामा पनि प्रभाव पारेको छ । चावहिलस्थित हाम्रो जग्गामा भवन बनाउने काममा महामारीले प्रभाव पारेको छ । आगामी आठ–दश दिनदेखि सो काम प्रभावित भएको हो । अब यो कहिलेसम्म प्रभावित हुन्छ ? भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । अन्य हिसाबले हेर्ने हो भने एमडीएमएस अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।
यो प्रविधिले अवैध मोवाइल आयात रोक्ने र राजश्व बढ्ने भनिन्छ । अहिलेको बजारमा कति फरक आउँछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ?
राज्यको औपचारिक नियमभन्दा बाहिरबाट ल्याएर व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि भन्दै बेच्ने गरेको पाइन्छ । केही लुपहोल रहेका कारण सिस्टममा समेत केही छोड्दिनुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । अब यसले ग्रे मार्केट ठ्याक्कै नियन्त्रण हुने जस्तो त मलाई लाग्दैन । अहिले पत्रपत्रिकामै वर्षकै पाँच–छ अर्ब रुपियाँको ग्रे मार्केट रोकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् । तर हामीले त्यतिसम्मकै आँकडा पाएका छैनौ । तर ग्रे मार्केट डराउनुपर्ने खालको चाहीं छ । यसले ९० प्रतिशत अवैद्यरुपमा मोवाइल तस्करीलाई रोक्छ ।
प्राधिकरणले आरटीडीएसको रकम खर्चिएर ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउने काम गरिरहेको छ । सेवा पुग्यो तर दैनिक प्रयोग हुनसक्ने गुणस्तरसम्म चाहीं पुगेन भन्ने छ नि ?
गुणस्तर आफैमा क्रमिक रुपमा सुधार हुने चिज हो । हामीले विगतको तुलनामा हेर्दा त बत्तिको गुणस्तर पनि पहिलेको तुलनामा अहिले सुधार भएको हो । हिजोको दिनमा र अहिले हामीले खाने पानीको अवस्था हेर्दा पनि अहिलेकै अवस्था राम्रो छ । त्यस्तै, इन्टरनेट पनि अहिले हाइ रेजोलुसनमा चल्ने भएको छ । फेसबुक, भाईबरले गर्दा इन्टरनेटको माग निकै बढि भएको हो । टिकटक चलाउन पनि बढि रेजोलुसनको खोजी हुनेगर्छ ।
अहिले त विगतको तुलनामा बढि व्याण्डविथ समेत प्रयोग हुने गरेको छ । हामीले घरमा फिक्स ब्रोण्डव्याण्ड लिन्छौं । अनि लेनबाट जोडेर चलाउँदा त्यसमा चलेन भने त्यति बेला भन्नु त जायज नै हो । तर राउटरको गुणस्तरलाई ध्यान नदिई दोष मात्र लगाउनु चाहीं त्यति सही होइन । बजारबाट ल्याइएका राउटरले कहाँसम्म टिप्छ ? भन्ने हामीले थाहा पाउनुपर्छ । एउटा कोठामा राखेको राउटरले अर्को कोठाको धेरै कुनाहरूमा नटिप्नसक्छ । इन्टरनेट ट्राफिक के हो ? भन्ने सबैले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । बत्तिको कारण पनि इन्टरनेटको गुणस्तरमा असर पर्ने गर्छ । हामीले तोेकेको मापदण्ड अनुसारका राउटर प्रयोग गर्दा निकै हदसम्म समस्या समाधन हुन्छ । अहिले ८० देखि ९० प्रतिशत इन्टरनेटमा खासै समस्या छैन् ।
अट्ठार वटा प्याकेजमध्ये अधिकांशको काम सकिएको भन्ने छ । सेवाप्रदायले सेवाको नाममा प्राधिकरणबाट पैसा मात्रै लगे । यसमा प्राधिकरणले गर्ने अनुगमन फितलो भएको भन्ने छ नि ?
हामीले तीन तहबाट अनुगमन गछौं । तीन तहबाट अनुगमन हुने प्रोजेक्टहरू निकै कम मात्रामा छन् । एउटा हामीले थर्ड पार्टी अनुगमन गर्छौ । दोस्रो हाम्रो कर्मचारीहरू गएर नमुना संकलन गर्नुहुन्छ । त्यसपछि हामीले सेवा प्रदायककोमा गएर प्राविधिकरुपमा समेत हेर्छौं । अहिले ग्रामीण ठाउँहरूमा इन्टरनेट पुगेको छ । कर्णाली जस्तो विकट ठाउँमा इन्टरनेट पुगिसकेको कुरा पनि त हामीले बिर्सनु हुँदैन । कतिपय ठाउँमा इन्टरनेटका प्राविधिक सामग्री बिग्रिदा बनाउन लामो समय लाग्ने गर्छ । तर ती सबै कुरा ग्राहकलाई थाहाँ हुँदैन । सोही कारण ग्राहकहरूले इन्टरनेट चलेन भनेर गुनासो गर्नु पनि स्वभाविक नै हो । सडक र बिजुलीको सुनिश्चितता नभएसम्म इन्टरनेट गुणस्तरीय हुँदैन । अन्य पूर्वाधारको विकास नगरेसम्म इन्टरनेटले मात्रै एक्लै गुणस्तरीय सेवा दिनसक्दैन ।
एक हजार सामूदायिक विद्यालयमा आईटी प्रयोगशाला स्थापना चाहीं कहिले पूरा हुन्छ ?
नौ सय ९५ गाउँमा आईटी प्रयोगशाला स्थापना भईसकेका छन् । त्यसका अधिकांश कामहरू अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छ ।
यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने र थप विद्यालयमा सेवा दिने योजना चाहीं के छ ?
नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणले काम गर्दै आएको छ । यो प्राधिकरणको आफ्नै काम मात्र होइन् । यो त नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्यवन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । यदी नेपाल सरकारले फेरि निर्देशन दिएमा प्राधिकरणले सेवा लान्छ । तर प्राधिकरण आफैले त लान सक्दैन् । विद्यार्थीहरूले आफूलाई सहज भएको भन्दै आउँनु भएको छ । काठमाडौंका स्तरीय विद्यालयले पढाउने शिक्षा अहिले सामूदायिकस्तरमा पुगेको पनि छ ।
नेपाल डाटामा आक्रामक हुँदै गएको देखिन्छ । सेवा प्रदायकको प्राथमिकता भ्याइसको भन्दा डाटातर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् । यही भ्वाइस सेवाको लागि लिइने लाइसेन्स शुल्क चाहीं २० अर्ब रुपियाँ बढि भयो । अब भ्याइसको बजार घट्दै गएकाले यो शुल्क पनि समयसान्दर्भिक हुनुपर्छ भन्ने सेवाप्रदायकको गुनासो आउन थालेको हो ?
गुनासो त पहिलेबाटै आएको हो । सो गुनासो रोक्नका लागि प्राधिकरणले कानुन नै संशोधन गर्नका लागि सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ । तर हाम्रो देशमा कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ । सोही कारण त्यसमा लामो समय लाग्ने गर्छ । यो हामीले महशुस गरेको कुरा हो । विगतमा कुरा उठे पनि अहिले हामीले फेरि सरकारलाई सिफारिस गरेको अवस्था छ ।
सक्रिय सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी अभाव हुने र निष्क्रियरूपमा बस्ने, सेवा विस्तार नगर्ने तर फ्रिक्वेन्सी मात्रै ओगट्नेलाई प्राधिकरणले न कारवाही गर्न सक्छ न फिर्ता लिन नै । यस्तो किन भइरहेको छ ?
सबै सेवा प्रदायकहरूलाई म प्राधिकरण आएपछि यसमा मैले केही प्रयास गरेको थिए । नेपालमा फ्रिक्वेन्सी कसैले दिन्छ भने प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट मात्रै दिन्छ । अब अन्य बाटो छैन । लामो समयसम्म फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर बस्ने कुरा म आएपछि रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । तर त्यही ऐनमा के छ ? भने नेपाल सरकारले पुनरावेदनसम्म पुग्न पाउने अधिकार छ । सोही अधिकार अनुसार नेपाल सरकारले नेपालको उद्योगलाई संरक्षण गर्ने उदेश्यले दुई–चार वर्ष समय दिएकै हो । तर प्राधिकरणलाई अर्को सेवा प्रदायक आउँछ भन्ने थाहा थियो ।
नेपालको सरकारले भनेको समयमा लाइसेन्स लिएकाले तिर्नुपर्ने रकम तिरेनन् भने प्राधिकरणले फेरि आफ्नो प्रक्रिया चाल्छ । होल्ड गरेर राज्यको स्रोतलाई यतिकै राख्ने र सक्रियलाई फ्रिक्वेन्सी नदिने पक्षमा प्राधिकरण छैन । सेवा प्रदान नगर्ने तर अनुमति पत्र मात्र लिएर बस्नेले अब ढोका बन्द गर्नुपर्छ ।
यूटीएल र सिजी, स्मार्टको क्षमतामा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सरकारले कडा नीति ल्याउन पनि नसक्ने, प्राधिकरणले गरेको निर्णय सरकारले उल्टाउने अवस्था छ । यसले टेलिकम क्षेत्रमा प्राधिकरण मुकदर्शक मात्रै बन्यो भन्ने आरोप छ नि ?
जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय पुनरावेदन अदालतले फेरि हेर्न पाउँछ । हामीले त्यसलाई निरीह भएको भन्न मिल्दैन । उच्च अदालतले गरेको निर्णय समेत सर्वोच्चले उल्ट्याउन सक्छ नि । यो त हाम्रो कानुनको प्रक्रियाअनुसार नै काम भएको हो । यस्तै, प्राधिकरणले गरेका काम पनि सरकारले निर्णय गर्ने अवस्था छ । अनावश्यकरुपमा फ्रिक्वेन्सी लिएर ठाउँ ओगटेनेलाई एनटीएले खारेज गरेको छ । एनटीएले त्यो पनि नगरेको भए तपाईंहरूले भनेको कुरा हामीले स्वीकार गथ्र्यौ ।
तर अहिले प्राधिकरणले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको अवस्था छ । यसमा कुन ठीक कुन बेठीक भन्ने तपाईंहरूले छुट्याउने कुरा हो । नेपाल सरकारले दिएको समय सीमा नाग्यो भने हामी नियामकीय कैची चलाउन सुरु गछौं ।
पछिल्लो समय सिमकार्ड वितरणको संख्याको तुलनामा डेटा प्रयोगकर्ता आधाजसो मात्रै छन् । त्यसमा पनि फोरजीको हिस्सा ७० लाख पनि छैन् । यो अवस्थामा फोरजीलाई नै विस्तार गर्नुको सट्टा फाइभजीमा हजार किन ?
हामी कहाँ ट्रकले लोड नपाएको बेलामा बस किन ल्याउने भने जस्तै कुरा हो यो । जसरी ट्रकको उपायोगिता र बसको उपयोगिता फरक छ । त्यसरी नै फोरजी र फाईभजीको उपयोगिता फरक छ । फोरजी छिटो छिटा सञ्चार गर्नको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तै, फाइभजी छिटो सञ्चार मात्र नभई खोज, अध्ययन, अनुसन्धानमा समेत उपयोगी हुन्छ । विकसित सहरका लागि पनि फाइभजीको आवश्यकता छ । मिसिनबाट मिसिनमा सञ्चार गर्न फाईभजीकै आवश्यकता पर्छ ।
भोलि उद्योगहरूमा कामदारले गर्ने काम पनि सेन्सरले गर्छ । मानिसले एक टुक्रा काट्न सक्छ भने मिसिनले त हजार टुक्रा काट्न सक्छ । त्यस्तै, फाइभजीकै मद्दतबाट अमेरिकाको डाक्टरले नेपालमा रहेको बिरामीको रोवर्ट प्रयोग गरेर रियल टाइममा अप्रेसन गर्न मिल्छ । फोरजीको विकसित रुप मात्र हो फाइभजी भन्ने सोच्यो भने फाइभजीलाई अन्याय हुन्छ । फाइभजीले उर्जा बचतमा समेत सघाउँछ । फाइभजी बीनाको स्मार्ट सिटी अब सम्भव छैन् । फाइभजी प्राधिकरणले ल्याउन खोज्यो मात्रै भन्नुभन्दा पनि हामीले यसको आवश्यकता पनि बुझ्नुपर्छ । हामीले यसलाई परीक्षण गर्न खोजेका हौं । परीक्षणबाट फाइभजी नेपाललाई कति उपयोगी छ ? भन्ने पनि त थाहा हुन्छ । विश्व बजारमा प्रयोगमा रहेका प्रविधि हामीले पनि भित्र्याउनुपर्छ । यो कुनै हतार होइन । फोरजी नल्याएको भए हामी थ्रीमा नै सीमित हुन्थ्यौं । प्रविधिमा नेपाल पनि अरु देशसँग काँधमा काँध मिलाएर हिड्नुपर्छ ।
टेलिकम कम्पनीहरूले आईपीओ जारी गर्ने कुरा त लत्याएका छन् नि ?
दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई कम्पनी ऐनले चुक्ता पूँजी पाँच करोड रुपियाँ पुगेको कम्पनीले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जानुपर्छ भनेको छ । सोही अनुसार पब्लिकमा त कम्पनीहरू गईरहेका छन् ।ऐनसेल, वोर्ड लिंक, सुविसु सबै धमाधम पब्लिकमा गएकै छन् । अब आईपीओ जारी गर्ने कुरा त प्राधिकरणको हातमा मात्र छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयसँग पनि सम्बन्धित छ । अब दूरसञ्चार ऐनले गर्नुपर्ने काम हामीले गरिहाल्छौं । म आफूलाई पनि कम्पनीहरूले आईपीओ जारी गर्ने कुरा लत्याउँछन् जस्तो लाग्दैन ।
अन्तिममा के भन्न चाहानुहुन्छ ?
अहिले कोरोना महामारीको कारण विषम परिस्थिति चलेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि दूरसञ्चार कम्पनीहरू फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गरिरहेका छन् । अहिले यस्तो अवस्थामा घरमा थुनिएर बसेको विद्यार्थीलाई शिक्षकसँग जोडेको छ । बिरामीले डाक्टरसँग जोडिन पाएको छ । घरमै बसेका कर्मचारी कार्यालयको काम घरबाट गरिरहेका छन् । यो सबै त इन्टरनेटको कारण मात्र सम्भव छ । टेलिकम्यूनिकेशन क्षेत्रको कारणमा मात्र यो सम्भव छ । अहिले त टेलिकम्यूनिकेशन क्षेत्र सबैको साथी बनेको छ । आफन्तसँग कुराकानी गर्न होस् अथवा टाढा बसेर काम गर्न होस, टेलिकम्यूनिकेशन खाना जतिकै महत्वपूर्ण भइसकेको छ । म यो विषम परिस्थितिमा के भन्न चाहान्छु ? भने यस्तो अवस्थमा पनि तपाईहरूले फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ । नागरिकमा तपाईंहरूसँग धेरै आशा छ । त्यसकारण सधै गुनासो आउनेगर्छ । गुणस्तर राम्रो भएन भन्ने सुनिन्छ । यसलाई सेवा प्रदायकले सकारात्मकरुपमा लिएर आफूहरू अझ बलियो बन्न आवश्यक छ ।
आन्तरिक माग पूरा गरेर बढी हुन्छ भने ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्दा फरक पर्दैन्ः रवि सिंह
बैंकका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुन जबरजस्ती गरिए संघर्षमा जान्छौंः भट्टराई
उद्योगी व्यवसायीलाई कसैले पनि दुःख दिन्छ भने त्यसलाई अपराधी घोषणा गर्नुपर्छः दुगड
प्रभु सेलेक्ट फण्डमा लगानी गर्नेले प्रतिफलको लागि निराश हुनुपर्दैनः कृष्ण गिरि
कामना सेवाको १० लाख कित्ता ऋणपत्र नेप्सेमा सूचीकृत